Uyenza njani indoda ebhinqileyo ukuba ithande ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Uyenza njani indoda ebhinqileyo ukuba ithande. Xa sithetha nge "womanizer" sithetha ngendoda ethi cinga nje ngokuzonwabisa ngaphandle kokulalanisa kungekho mfazi. Ngokuqhelekileyo zihlobo lomntu ongekhe ucebise ngalo kumntu omthandayo. Nangona kunjalo, xa uthando lunkqonkqoza emnyango wakho, ngekhe ulawule ukuba uthandana nabani kwaye uzama ngazo zonke iindlela ukutshintsha olohlobo lwendoda ojonge kuyo.
Kungenzeka ukuba ngekhe utshintshe indoda ethanda umfazi, kodwa kusenokwenzeka ukuba ugqibela ngokuthandana nawe kwaye ugqibe ukugxila kube kanye. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ube sengqiqweni kwaye uyiqonde loo nto isimilo sabanye asixhomekekanga kuwe kwaye nguwe wedwa onokwazi zithande kwaye uzihlonele.
Kwelinye icala, kufuneka kuthiwe ezi ndidi zabantu zihlala zitsalwa zizenzo ezithile, ukuba uyakwazi ukuzalisekisa, kunokwenzeka ukuba Fumana ingqalelo yabo, bade babathande. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zintoni?
1 Ungamoyisa njani umntu obhinqileyo: Iingcebiso
1.1 1. Fumana ingqalelo yabo
1.2 2.Myeke abe nguye okukhangelayo
1.3 3.Menze azole kwaye azive yena
Ungamoyisa njani umntu obhinqileyo: Iingcebiso
Ngoku siza kukunika iingcebiso ezithile onokuzisebenzisa ukwenza ukuba umntu obhinqileyo awele eluthandweni. Kodwa ngaphezu kwako konke, khumbula ukuba eyona nto ibalulekileyo kukuba awusoze uyeke ukuba nguwe.
1. Fumana ingqalelo yabo
Amadoda abhinqileyo ahlala engabantu abo bayathanda ukuziva bethandwa ngabafazi. Ayinamsebenzi ukuba umhle okanye umbi, umde okanye umfutshane. Bayathanda umtsalane kwaye bathanda abafazi ukuba babone. Ke ngoko, ukuba uyakwazi thatha inyathelo lokuqala, uya kuba nethuba elihle lokuba akuphawule.
Nazi ezinye zeendlela zokwenza:
Mphathe ngokusela: Ukuba ukwi-bar okanye kwindawo yokutyela, thumela isiselo kwitafile yakho y buza umlungiseleli akuxelele ukuba ngubani oyithumele kuwe. Umbono kukusondeza. Xa ndisiza kukubulela, thatha ithuba lokuqalisa incoko. Ungavumeli incoko ikhukhumele kwisini. Thetha ngabahlobo bakho nento othanda ukuyenza. Nika ingqalelo kule nto ithethwa ngumfazi kwaye uqaphele ukuba uqala ukukhokelela incoko ngendlela engeyiyo.
Yiba ngqo. Endaweni yokubuza imibuzo thethani ngokuzithemba nimxelele into eniza kuyenza kunye. Sukumbuza ukuba uyafuna ukuyenza, mxelele nje ukuba uza kuyenza.
Mlahlekise ngamatikiti athile. Thenga amatikiti amabini kumboniso okanye kumdlalo bhanyabhanya kwaye uxele xa uthetha naye. Yitsho into enje: - «bendiza kuya kumboniso nomhlobo wam, kodwa akazokwazi ukuya. Yiza nama". Lumka xa uthatha umntu obhinqileyo ukuya kuye iindawo ezixineneyo, ngakumbi kwimivalo. Ngenxa yokuba ekunye nawe ayithethi ukuba akazami ukuthetha nabanye abafazi.
Menze akubuze. Ukuba awufuni kummema, mnike imiqondiso ukumazisa ukuba ufuna ukuchitha ixesha elininzi kunye naye. Chaza imovie ofuna ukuyibona okanye iklabhu ofuna ukuya kuyo. Zama ukumenza acinge ukuba lo mbono ngowakhe.
Ukuba ngokuchaseneyo sele uthandane nomntu onjalo, Kungenzeka ukuba sele uthethile kwaye utsaliwe yi-verbiage yabo. Mhlawumbi uzama ukukukholisa ngenkangeleko yakhe, ukuzithemba kwakhe, kunye nemali. Zama uku Mazi kwinqanaba elinzulu nangakumbi lomntu. Ungamvumeli akhokele incoko ngokuthanda kwakhe.
2.Myeke abe nguye okukhangelayo
Musa ukuphelelwa ngumonde kwaye ungayikhangeli ngokwakho. Lindela umntu oza kukukhangela. Ezi ntlobo zabantu zine-ego enkulu kangangokuba abanakuvumela ukuba ulibale ngayo de bafumane le nto bayifunayo. Ke ngoko, funda ukudlala amakhadi akho kakuhle.
Landela ezi ngcebiso:
Menze acinge ukuba akangoyena ndoqo kuwe: Xa umntu obhinqileyo ekubiza ukuba udibane, Sukuzicima ezinye izicwangciso ngenxa yakhe. Bonisa ukuba unobomi obungaphandle kwakho kwaye uyakonwabela ukuzixhoma nabahlobo bakho. Ukuba uyarhoxisa izicwangciso zakho nabahlobo ukuze uphume kunye ne-manizer, uya kucinga ukuba sele sele ephethe wena kwaye uya kugqiba ukulahlekelwa ngumdla.
Menze alinde: Kungekudala okanye kamva, umlukuhli uya kufuna ukukusa ebhedini. Kuye, yiyo kuphela into ebalulekileyo. Ukuba ufuna ukumtshixa, menze alinde Ukuba phakathi komhla akhankanye ukuba ufuna ukuya phambili, yitsho into enje; Andizukulala nawe ngokuhlwanje, kodwa bendonwabile. Nditsalele umnxeba nayiphi na imini. Ncuma okanye wink uhambe. Ngale ndlela uya kwazi ukuba unomdla kuye, kodwa oko awuyi kuyenza lula kubo.
Seta iikhrayitheriya zakho: Ukuba ufuna ukuxabiswa ngumfazi othanda abantu basetyhini, kuya kufuneka ukholelwe kwixabiso lakho. Zihloniphe kwaye umenze abone iimpawu zakho. Ungaphumi naye xa ekubiza ebusuku. Endaweni yoko, mxelele ukuba kungcono atsalele umnxeba phambili enze izicwangciso. Xa ufowuna emini, yenza okufanayo.
Buyela umva kancinci: Ukuba uthandana iintsuku zilandelelana, thatha ikhefu nokuba awufuni. Ungacinga ukuba izinto zizakulunga ukuba uyaqhubeka uthandana, kodwa iya kuba ngaphandle. Eyona nto unokuyenza yile mandikukhumbule. Sukujonga kakhulu kuye, awunyanzelekanga ungamhoyi naye, kodwa makalinde.
Mnike indawo yokwenza izinto zakhe: Ingabonakala iyingozi xa unikwa igama lomntu obhinqileyo, kodwa yi intshukumo eyimfuneko. Nokuba ufuna ukuhlala ngasemva kwakhe ngalo lonke ixesha ukubona ukuba akwenzi ngasemva kwakho, uyachasa. Gcina ukhumbula ukuba ukumbiza ngalo lonke ixesha okanye ukuzama ukuhlala yonke imizuzu yexesha lakhe kuya kumtyhalela kude. Uya kuqala ukukubona njengomnye ukunamathela okanye umfazi osweleyo. Ukuba ufuna eze kuwe, mnike indawo. Kuthe cwaka, uya kuphinda akubize kwakhona.
3.Menze azole kwaye azive yena
Nje ukuba umisele ubudlelwane naye kwaye waqonda ukuba akanako ukwenza nawe into ayifunayo, inqaku elilandelayo lelo yeka ukuzenzisa ukuba ngomnye umntu oza kukusa ebhedini. Ngenxa yoko, eyona nto unokuyenza kukwenza uzive ukhululekile. Ngale ndlela iya kuqala uyonwabele inkampani yakho kwaye uya kubona kuwe into engaphaya kwento yesondo.
Ukufezekisa oku, landela ezi ngcebiso:
Sukuyityhala: Amanye amadoda, ngakumbi abantu ababhinqileyo, abafuni kuva uxinzelelo lokuzinikela. Sukuzama ukumkholisa ukuba athathe inyathelo elilandelayo kubudlelwane.. Xa umtyhala, uzifumana usesichengeni ngakumbi kwaye umnike onke amandla kubudlelwane. Ukuba ufuna ukuba yehlise umoya, kufanele kubekho ukulingana.
Mcele ukuba adibane nabahlobo bakhe: Ukuba awukadibananga nabo, kulungile ukudibana nabo. Yenza itheko kwaye umcele ukuba ameme abahlobo bakhe. Ukuba ziyavela, bahloniphe. Qiniseka ukuba ubazi kakuhle. Gcina ingqondo evulekile kwaye ubonise umdla.
Mkhumbuze ngexabiso onalo: Ukuba ufuna umfana abe nobudlelwane nawe, kufuneka afune okufanayo. Imvakalelo yolonwabo kunye nawe kufuneka inyaniseke kuye, kwaye kuya kufuneka wenze konke onako ukumenza azive ngaloo ndlela. Oku akuthethi ukuba kufuneka uchithe ixesha kunye namandla abo ukwanelisa iminqweno yabo, kodwa kuyayenza Kuya kufuneka umenze aqonde ukuba ungamzisa kangakanani ebomini bakhe.
Sukuthetha ngobudlelwane. Ukuthetha ngemeko yakho kunokuphelisa ulwalamano. Endaweni yokukhathazeka ngokuzibophelela jolisa ekubeni wonwabe naye.
Yonwaba. Gxila kwi yenza amava amatsha nakhayo. Yenza izinto kunye, yiya kwimiboniso nakwimidlalo. Mbonise ukuba kunjani ukuba nolwalamano olwanelisayo kwaye unokufuna ukugcina kunjalo. Musa ukucwangcisa yonke into kwangaphambili. Zama ukuzenzekelayo. Ukuba kukho into evelayo ofuna ukuyenza, ungayeki ukuyenza. Uya konwaba kwaye uyakubona oko Usenokuba nobomi obonwabisayo ngaphandle kokuhamba lonke ixesha usuka kwintyatyambo uye kwintyatyambo.
Khumbula ukuba ezi ngcebiso okanye esinye isiqinisekiso sokuba inkwenkwe oyithandayo ayizukuwa ezinyaweni zakho. Uthando aluyiyo ngqo isayensi. Nangona kunjalo, ukuba uyakwazi ukubalandela, uya kuba nakho yima uqinile phambi kwayo nayiphi na indoda kwaye awuyi kuziva ukhululwe. Kananjalo nasiphi na isiphumo, ngekhe abone kuwe umfazi onqwenela ukuwela engalweni yakheKe uya kuhlala unayo vula umnyango entliziyweni yakho. Le kuphela kwempendulo yokwenene kumbuzo Uyenza njani indoda ebhinqileyo ukuba ithande.